Susa izangqa ezimnyama kunye namabala esikhumbeni ngeFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Susa izangqa ezimnyama kunye namabala eluswini nge Photoshop ngokukhawuleza nangokulula ukuze fumana ulusu olugqibeleleyo Ufuna malini. Lungisa loo mifanekiso apho unayo izangqa ezimnyama ye-owl yokulala kancinci ngobusuku obungaphambili, susa elo pimpi lincinci Enjani yona bummer ifoto enkulu yokuthweswa izidanga. Zonke iintlobo zebug zesikhumba zinokuba njalo lungisa ngokukhawuleza okukhulu.
Photoshop ngumjikelo womlingo onokwazi ukuphucula ugqirha ogqirha ogqwesileyo ngokufumana ucoceko olucocekileyo lolusu olungenabala. Fumanisa imfihlo yemagazini yefashoni kunye nentengiso yokufunda ukulungisa ulusu lwazo zonke iifoto zakho. Ukuphucula iifoto zakho ngokufumana coca ulusu Iimodeli ngesixhobo esimangalisayo sokuphinda ubambe ifoto.
Fumana ulusu olugqibeleleyo lunokwenzeka enkosi kumlingo we Photoshop kunye noluhlu lwayo lonke lwezixhobo zokuphinda ubambe kwidijithali. Ngezixhobo ezibini kuphela esiza kuziphumeza uhlambulule kakuhle ulusu Iifoto zethu zifezekisa iziphumo zobungcali.
Kule nto isikhundla Siza kusebenzisa oku kulandelayo herramientas de Photoshop:
Isixhobo seSitampu seClone
Siza kufunda la magama alandelayo:
Susa imijikelezo emnyama
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuba nefoto apho uhlobo oluthile lwempazamo lunokubonwa eluswini, eyona nto ifanelekileyo kukuqala ukusebenza ukususwa kwezangqa ezimnyama.
1 Susa izangqa ezimnyama ngeFotohop
2 Isixhobo seSitampu seClone
3 Isixhobo sePatch
Susa izangqa ezimnyama nge Photoshop
Susa izangqa ezimnyama nge Photoshop yinto elula kakhulu ukuyenza ngenxa ye isixhobo se-clone buffer, Kwimizuzu nje embalwa ungasusa izangqa ezimnyama ezimbalwa iziphumo ezizizo. Izangqa ezimnyama aziyonto ngaphandle kwendawo emnyama kulusu olungaphantsi kwamehlo, oku kuyalungiswa ngokukopa iindawo ezingachaphazelekanga yile ngxaki njengoko siza kubona ngezantsi.
Sikhetha ifayile ye- isixhobo se-clone buffer ebekwe kwimenyu esekhohlo ye Photoshop.
Emva kokukhetha isixhobo se-clone buffer into ekufuneka siyenzile ubunzima obuphantsi buncinci, la ukukhanya kunye nokuhamba siza kubathoba kancinci. Ingcamango yolu hlobo lwe-retouch kukufezekisa lungisa ulusu kancinci kancinci kancinci ukuyenza ibe lutshintsho olufihlakeleyo nolusezingeni eliphezulu.
Into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqala susa izangqa ezimnyama kwifoto, Ngale nto sisondela ngokwaneleyo kwindawo esiza kuyichukumisa kwaye siqale kuyo Khuphela iindawo ezikufutshane nezangqa ezimnyama. Ukukopa indawo ngesixhobo se-clone buffer ekufuneka siyenzile cinezela iqhosha le-alt kwaye ucofe ngempuku, ngokuzenzekelayo Photoshop iya kukopa loo ndawo yomfanekiso ngalo lonke ixesha sicinezela imouse. Icebo lokufumana into elungileyo Iindawo zokukopa zisondele kakhulu kulusu oluchaphazelekayo ukuzama ukuphuma kwithoni yolusu kangangoko.
Amachaphaza amthubi amele iindawo esinokuzikopa ukuzincamathisela kwindawo yomgca otyheli, kancinci kancinci sicoca izangqa ezimnyama ngeesampulu zolusu ezahlukeneyo.
Ukuba ngaphandle kokuphelisa izangqa ezimnyama sifuna susa amaqhakuva amancinci, amanxeba, iincukuthu, okanye amabala Naluphi na uhlobo sinokusebenzisa Isixhobo sepatch. Esi sixhobo sisivumela ukuba sikhethe ibala kwaye sisuse ngokukhawuleza.
Isixhobo sepatch kakhulu kulula ukuyisebenzisa konke ekufuneka sikwenzile kukuba khetha indawo enebala ukuba sifuna ukuyiphelisa kwaye siyitsalele kwinxalenye yolusu olulandelayo olungenabala.
Siqinisekisa ukuba sikhethe ifayile ye ukhetho lomthombo ngaphakathi kwesixhobo seqhekeza ukulungisa impazamo kwaye ungayiphindi, ukuba sikhetha enye indlela esiza kuyifumana amabala aphindwe kabini kulusu.
Isixhobo sepatch isebenza njengaso nasiphi na isixhobo sokhetho, into ekufuneka siyenzile kukudala ifayile ye- Ukukhetha ngesandla indawo esifuna ukuyichukumisa.
Fumana ulusu olupheleleyo lweemagazini kunokwenzeka enkosi ku Photoshop ukulawula ukubeka ecaleni uqhaqho lweplastiki kunye nokwenza izithambiso. Kwimizuzu embalwa yokuhlela sinakho lungisa yonke loo mifanekiso ukuba nangona begqibelele sinokufumana iimpazamo ezincinci esingathanda ukuziphucula.
Akumelanga silibale ukuba ngamabala, amaqhakuva, amanxeba, izangqa ezimnyama okanye naluphi na uhlobo lwempazamo kulusu sigqibelele ngokugqibeleleyo :) Ngethamsanqa ngazo zonke iiseshoni ezizayo zotyando lwedijithali kunye neFotohop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Susa izangqa ezimnyama kunye namabala eluswini ngeFotohop
UCarmen Trujillo sitsho
Kwaye bathi ukhilimu uyathengwa phi ???
Phendula Carmen Trujillo
Okwangoku eMercadona asikayiboni! hahaha kufuneka sisebenzise i-Photoshop ...